Igumbi LeStudio Ngekhishi - hamba uye eKamala Beach
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sleepy Mice
Leli gumbi lesitayela sangaphakathi saseScandinavia lenzelwe ukwenza izivakashi zizizwe zikhululekile. Ukuze senze kanjalo, sinikeza okungcono kakhulu kumasevisi nezinsiza. I-Wi-Fi yamahhala kuwo wonke amagumbi, ukuphepha kwamahora angu-24, isitolo esilula, ukugcinwa kwansuku zonke kwezindlu zansuku zonke ezinye zezinsiza ezihlukanisa i-Icon Park kwamanye amahhotela noma amafulethi edolobheni.
I-Icon Park itholakala kahle ekugcineni eningizimu yeKamala uhambo lwemizuzu embalwa nje ukuya eKamala indawo enhle yolwandle olunesihlabathi esimhlophe kanye nezinsiza zasendaweni. Indawo yangaphakathi yaseScandinavia / yesimanje yamafulethi idala indawo esesitayeleni nenethezekile yokuhlala. Ngokukhetha okuhle kwamasayizi amayunithi ongakhetha kuzo njengezitudiyo ezijwayelekile ukuya kuma-studio anamakhishi, indawo enkulu yokulala eyi-1 noma ama-penthouses ama-2 aphansi akuvumela ukuthi ukhethe izinga lokunethezeka olidingayo eholidini lakho. Isikhungo sedolobha siqhele ngamakhilomitha ayi-13.3 futhi isikhumulo sezindiza singafinyelelwa phakathi nemizuzu engama-45. Njengoba indawo yalo ekahle, ihhotela linikeza ukufinyelela okulula ezindaweni okufanele uzibonele idolobha.
Jabulela ukubhukuda kwakusihlwa echibini elikhanyayo le-neon, noma ukuzilolonga ngokugcwele esikhungweni sokuzilolonga noma mhlawumbe uphumule emachibini ethu ashisayo nabandayo e-onzen alandelwa ukwelashwa okugcwele kwe-spa, i-Icon Park inakho konke.
Uzokwazi ukungithola ngohlelo lwakho lokusebenza oluthandayo ngo-9am kuze kube ngu-6pm ngaso sonke isikhathi sokuhlala kwakho endaweni yethu nganoma yimuphi umbuzo ongase ube nawo nanoma yini ongase uyidinge. Kuyinjabulo yethu ukukusiza nganoma yiziphi izindlela esingakwenza ngazo.
Uzokwazi ukungithola ngohlelo lwakho lokusebenza oluthandayo ngo-9am kuze kube ngu-6pm ngaso sonke isikhat…